တိုယိုတာ ကားမောင်းနေသူများ သိသာရန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » တိုယိုတာ ကားမောင်းနေသူများ သိသာရန်
တိုယိုတာ ကားမောင်းနေသူများ သိသာရန်
Posted by kai on Jan 27, 2010 in Community & Society, Know-How, DIY, U.S. News |4comments
ကားအစင်း ၂.၃သန်းကျော်ကားစီးနေသူတွေထံကပြန်မှာယူပြီး ပြင်လိုက်ရတဲ့ တိုယိုတာဟာ အဂါင်္နေ့ ဇန်န၀ါရီ ၂၆မှာ ကားအရောင်းတွေပါရပ်ထားမယ်လို့ ကြေညာပါတယ်။
သတင်းကိုတော့ အောက်က မူရင်းအင်္ဂလိပ်သတင်းမှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ပြောချင်တာက ဗမာတွေအတွက်ပါ။ တကယ်လို့ တိုယိုတာ ၀ယ်စီးနေတယ်၊ သူတို့ထုတ်ပြန်တဲ့ ကားအမျိးအစားမှာပါနေတယ်ဆိုရင် အမြန်သာ ပြေးပြီး ပြုပြင်ကြစေချင်ပါတယ်။ သူတို့ ပြန်ခေါ်နေတဲ့ အဓိကအကြောင်းက လီဗာက ကားကြမ်းအောက်ခင်းခြေသုတ်ဖုံနဲ့ ညပ်ပြီး လီဗာနင်းထားသလိုဖြစ်တတ်တာမို့ ပါ။
အဲဒါဟာ အန္တရာယ်အလွန်ကြီးပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ၂နှစ်လောက်ကစလို့ အသက်တွေပါသေကုန်ကြတဲ့အထိ ပြသနာတွေဖြစ်ကုန်ကြလေရဲ့…။
ကိုယ့်ရဲ့ကား အဲဒီလိုလီဗာကပ်ပြီး ဖရီးဝေးမှာ မိုင်၁၂၀လောက်အထိ တောက်လျှောက်တက်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ.. အဲဒီအကြောင်းဆွေးနွေးကြည့်ကြပါစို့..။
လိုအပ်တာတွေရှိဦးမယ်ဆိုရင်လည်း ကားအကြောင်းနားလည်သူတေံက ဖတ်မိရင်ဖြည့်စွက်ပေးကြစေလိုပါတယ်။
အောက်မှာ ဖြစ်နိုင်ချေနဲ့ လုပ်ရမှာတွေ ချရေးကြည့်ပါမယ်။
တကယ်လို့ ကားဟာ မောင်းနေရင်း အရှိန်တက်လာပြီး လီဗာကပ်နေသလိုဖြစ်လာရင်..
၁။ ကားသော့ကို ပိတ်လိုက်ပါ။
ဒီလိုလက်နဲ့လှည့်ပိတ်ရတဲ့ကားသော့မျိုးမဟုတ်တာတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ၊ နှိပ်ရတဲ့ ခလုပ်ဖြစ်နေတာမျိုးဆိုရင် ရီမုတ်နဲ့ဖွင့်ပိတ်တာမျိုးဆိုရင်..တမျိုးစဉ်းစားကြတာပေါ့။ နှိပ်ရတဲ့ခလုပ်ဆို ၃-၄စက္ကန့်လောက်တောက်လျှောက်ဖိထားရင် ရပ်ပါတယ်။ သာမန်အားဖြင့် ကားသော့ပိတ်ပစ်လိုက်ရင် အင်ဂျင်ရပ်သွားတာမို့ လီဗာဘယ်လောက်နင်းနင်း ကား အရှိန်တက်လာစရာ အကြောငိးမရှိပါ။ ဒါပေမဲ့ တခချို့လေအားဖြင့် ကူညီတွန်းပို့ တဲ့ ဘရိတ်စံနစ်အချို့တော့ အားလျှော့တတ်ပါတယ်။ ထရပ်ကားတွေမှာအသုံးများခဲ့တဲ့ လေဘရိတ် မျိုးဆိုပါစို့။ (ဒါမှမဟုတ်)ကားကွန်ပျုတာကနေ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ အေဘီအက်စ်စံနစ်မျိုးတွေလည်းအနည်းငယ်ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ပျက်သွားတယ်တော့မဟုတ်။နောက်…
ပါဝါစတီယာရင် လေးသွားပါမယ်။ ဒါကလည်း လှည့်လို့တော့ ရပါသေးတယ်။
ဒီလုပ်နည်းဟာ နားလည်ရအလွယ်ဆုံး အဖြေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကားသေ့ာပိတ်ပြီး ဘရိတ်နင်းပြီးလမ်းဘေးဖြည်းဖြည်းဆွဲချ ရပ်လိုက်ယုံပါပဲ။
၂။ သော့ပိတ်လို့ မရရင် ဂီယာကို နှုထရယ် (N )မှာထားလိုက်ပါ။ ရရင်လည်းထားလိုက်ပါ။
ကားအင်ဂျင်နဲ့ ဘီးကို ဆက်စပ်ပေးထားတာက ဂီယာဘောက်စ်ပါ။ ဂီယာကို neutral ဖရီးထားလိုက်ရင် ကားအင်ဂျင်က လည်ပတ်အားဟာ ကားဘီးတွေဆီမရောက်တော့ပါဘူး။ သဘောက လီဗာဘယ်လောက်နင်းနင်း ကားအင်ဂျင်ဟာ အော်နေပြီး ကားက ပြေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်က မန်ညူရယ်ဂီယာတွေက တော့ ကလပ်နင်းလိုက်ရင်လည်း အင်ဂျင်နဲ့ ဘီးမောင်းနှင်တဲ့ကြားက အဆက်အသွယ်ပြုတ်သွားပါတယ်။ ဒီက အော်တိုဂီယာတွေအတွက်တော့ Nထားလိုက်ရင် ပြီးပါတယ်။ ပြီးတော့မှာ ဘရိတ်ဖြည်းဖြည်းချင်းနင်းပြီး ဘေးဆွဲချယုံဖြစ်ပါတယ်။
ဂီယာကို နီပါတ်တဆင့်စီကြီးလိုက်လို့ရပါတယ်။ ဂီယာက ကားရဲ့ စပိ(အလျှင်)ကို ထိန်းနိုင်ပါတယ်။ စပိ တဆင့်ဆီကျသွားမှ ညူထရယ်ထားလိုက်လည်း ရပါတယ်။
ပြိုင်ကားမောင်းသူတွေဟာ ကားအကွေ့တွေမှာ ဘရိပ်နဲ့မကွေ့ရပါဘူး၊ ဘရိတ်နင်းကွေ့ရင် အရှိန်နဲ့ကားက လည်ထွက်သွားတတ်တာမို့ ဂီယာနဲ့ ထိန်းပြီးကွေ့ကြတာပေ့ါ။ ဂီယာရဲ့အဓိကအလုပ်က ကားရဲ့ပါဝါနဲ့ အလျှင်ကို ချိန်ဆအချိုးချပေးတာပါ။ဥပမာ။ ။တောင်ကုန်းတက်ရင် ဂီယာအကြီးထားလိုက်တာဟာ ကားက ပါဝါအားရှိလာပြီး အလျှင်ကျသွားတာမျိုးကိုဆိုလိုပါတယ်။
၁။ ကားရဲ့ လက်ဆွဲဘရိတ်(ဒါမှမဟုတ်) ပါကင်ခြေဘရိတ်( ခြေထောက်ပိုင်းအပေါ်မြင့်မြင့်ထောင့်ကဘရိတ်)လုံးဝမဆွဲ၊ မဖိချပါနဲ့၊ ကားလည်ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။ အထူးပြုပြင်ထားတဲ့ကားမဟုတ်ရင် အဲဒီဘရိတ်တွေက ကားဘီး၂ဖက်ထဲကိုပဲ ဖမ်းတာမို့ ပါ။ အရှိန်နဲ့သွားနေတုံး ဘီး၂ဖက်ထဲ ဘရိတ်ဖမ်းရင် ကားက တပါတ်လည်ပြိး မှောက်ပါလိမ့်မယ်။
၂။ ကားအရှိန် မိုင် ၆၀ ကျော်မှာ တခုခုကို တိုက်ပြီးရပ်လိုက်မယ် စိတ်မကူးပါနဲ့၊ အဲဒီအရှိန်နဲ့ ကားရှေ့ခန်းကလူတွေ အသက်အန္တရယ်အရမ်းများပါတယ်။ ရှပ်ပြီးတိုက်ရင်းအရှိန်လျှော့မယ်လည်း စိတ်မကူးပါနဲ့။ မှောက်တတ်ပါတယ်။ ကားဘန်ပါရှေ့ပိုင်းက ဆန်ဆာ မှာကားတိုက်တယ် ထင်ပြီး အဲယားဘက်(လေအိပ်)ပွ့င်လာရင် ဘာမှလုပ်ရတော့မယ်မဟုတ်မှာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ စိတ်အေးအေးနဲ့ အရှိန်လျှော့ချဖို့ သာ အပေါ်ကအဆင့်တွေအတိုင်းလုပ်ပါ။ ကားဟွန်းတီးပါ၊ မီးတွေအကုန်ဖွင့်ပါ။ အရေးပေါ်မီး ဖွင့်ပါ။ ဘေးက ကားမောင်းသူတွေသိပါစေ။
၃။ ကားသော့ပိတ်ပြီး သော့ဆွဲမထုတ်လိုက်ပါနဲ့၊ ကားစတီယာရင် လော့ခ်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
အပေါ်က ၁။၂။၃ တွေကို တီဗီထိုင်ကြည့်နေရင်းကားအလျှင်အရမ်းမြန်လာလို့ ၉၁၁ ဖုံးဆက်ပြောနေရင်းက လမ်းဆုံဝင်သွားတော့ ကားတိုက်မိပြီးသေသွားတဲ့ မိသားစုရဲ့ ဗီဒီယိုကြည့်ပြီး ချရေးတာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်များအဲဒီနေရာမှာ ဆ်ုဘယ်လိုလုပ်မလဲစဉ်းစားရင်းပေါ့။
ပြီးတော့ အခုအတွေးတွေ တခြား မြန်မာတွေလည်း မျှဝေစဉ်းစားလို့ ရအောင် ရေးတင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ကားဟာ တိုယိုတာဖြစ်နေပြီး တိုယိုတာက ကျေညာတဲ့စာရင်းမှာပါတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်တယ်ဆို အမြန်ဆုံး ကားဒီလာ ဆီပြေးပြိး ပြင်စေချင်တာပါပဲ။ တိုယိုတာမဟုတ်ပဲ တခြားကားတွေ မဖြစ်ဖူးပြောလို့မရပါဘူး၊ ဖြစ်ခဲ့ရင် လုပ်ရမှာတွေသိထားတော့ ကောင်းတာပေါ့။ ဒီစာတွေကို သတင်းစာမှာလည်း ထည့်ပေးပါမယ် တတ်နိုင်ရင်ဖြန့် ပေးလိုက်ပါ။
အောက်မှာ သတင်းမူရင်းဖတ်ဖို့ ..။
By Blake Ellis, contributing writer, and Peter Valdes-Dapena, senior writerJanuary 26, 2010: 11:56 PM ET
NEW YORK (CNNMoney.com) — Toyota Motor Sales USA Inc. said Tuesday it is asking dealers to temporarily suspend sales of eight models.
-CNN’s Allan Chernoff contributed to this report.
အချက်အလက်လေး တခု၂ခု ထပ်တင်ထားချင်လို့ပါ။
တိုယိုတာကို အကြီးအကျယ် ဒုက္ခပေးနေတဲ့ စက်အစိတ်အပိုင်း ၂ခုက..
ပထမတခုဖြစ်တဲ့ ကားလီဗာမက်ကက်နစ်ဇင် ကို အင်ဒီယားနားစက်ရုံကထုတ်တာပါတဲ့..။
ဒုတိယတခုဖြစ်တဲ့ ကားကြမ်းခင်းခြေသုတ်ပြားကို ကနေဒါကထုတ်တာပါတဲ့….ခင်ဗျား.။
Nay Phone Hlan says:
အဲဒီလိုဖြစ်ရင် စက်မသတ်နဲ.လေ ဂီယာကို လျှော့လိုက်ပေါ့